people Nepal » मतदान भोली : कसरी हाल्ने ? मतदान भोली : कसरी हाल्ने ? – people Nepal
मतदान भोली : कसरी हाल्ने ?
३० वेशाख , काठमाडौं – कुनै मतदाताले मतदानपछि मतपत्र कसैलाई देखायो भने के हुन्छ ? झुक्किएर पनि त्यसो नगर्नुस् । मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई तत्कालै १५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन् ।
त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक गरिएको मतपत्र मतपेटिकामा नखसाली छुट्टै राखिनेछ, त्यो गणनामा समावेश गरिने छैन । तपाईको मत खेर जानेछ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।